OwoZalo ukhala ngabafanyana abamshelayo
UNTOMBIFUTHI Dlamini uthi yena noMam’uMadlala bahluke kakhulu Isithombe:SITHUNYELWE
AKASABUTHI quthu ubuthongo umlingisi woZalo ngenxa yabafana abancane abamfuna uthuli. UNtombifuthi Dlamini, olingisa indawo kaMam' uMadlala uthi uhlushwa ngabafana abaneminyaka eko-18 bamcela uthando.
"Yinqwaba impela engifuna phansi phezulu ngoba izitshela ukuthi mina noMam' uMadlala singumuntu oyedwa. Bathi bafuna ukuba ngoBen 10 bami."
Uthe bahlushwa wukuthi abazi ukuthi yena uhluke kakhulu kuMam' uMadlala, okuyindawo esimphendule intandokazi emdlalweni Uzalo.
"Sifana ngento eyodwa zwi naye, wukuthi sobabili sithanda isonto. Mina nginamahloni futhi ngithanda ukugunda i-cut nokugqoka izimpahla ezimfishane. Ngicabanga ukuthi yilokho okubuye kubahehe kakhulu kanti uMam' uMadlala uyiqhalaqhala elikhonze izindaba zabantu futhi elithandana nabafana abancane," kusho uNtombifuthi.
Okwenza abafana bafune kanje uNtombifuthi wukuthi uMam' uMadlala kuZalo uqale wajola nomfana omncane, uKhehla (okuyindawo ebilingiswa wuThobani Nzuza) ngesikhathi exoshwa nguyise (uSiyabonga Shibe) nonina ongamzali (uBaby Cele).
UMam' uMadlala wabe esekipita naye kwakhe futhi emnikeza nezimali. Kulezi zinsuku uMam' uMadlala usothandweni oluvutha amalangabi nesoka lakhe elincane kunaye, uSbusiso (okuyindawo elingiswa nguSimphiwe Majozi).
UNtombifuthi akakufundelanga ukulingisa futhi wayengakaze wakuphupha ngisho elele. Uthe kwathi ngo-2014 ezihambela emgwaqweni, esasebenza eyi-cleaner emtholampilo KwaMashu, kwaqhamuka abadidiyeli boZalo bethungatha abalingisi.
"Basithatha basiyisa eK-Cap lapho sasingaphezu kuka-500. Sasingahlungwa kodwa kwakuvele kuthiwe yisho igama lakho nesibongo. Sagcina sisele siwu-25," kusho uNtombifuthi ophothule u-matric eZakhe High, KwaMashu ngo-1992.
Uthe kuZalo waqala edlala indawo engabalulekile ngaphambi kokunikezwa ekaMam'uMadlala ngo-2015. Wawushiya kanjalo umsebenzi wokuba yi-cleaner eGoodwins Clinic, KwaMashu lapho ayeholelwa khona uR1 500 ngemvilophu ekupheleni kwenyanga.
Uthe uyasola ukuthi ukungena kwezokungcebeleka kuyamlandela njengoba uyise kwakuyisilomo soKhozi FM, uCyril Bongani "Kansas City" Mchunu.
Uthe izinsizwa ezimdingayo azikhohlwe ngoba usenaye umaqondana futhi okuqondayo ukuthi uyalingisa kuZalo ukuze kuxoshwe ikati eziko.
Sebeqalile ukupiklelana abaculi abazolwa ngePhasika